Itheku Fihla Ukuhamba uye emabhishi izitolo zamathilomu - I-Airbnb
Itheku Fihla Ukuhamba uye emabhishi izitolo zamathilomu
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Darren & Collette
Kulungiswe kabusha amafulethi amabili okulala anendawo ekahle yokuhamba ibanga ukuya kuyo yonke into oyidingayo.Amabhishi, umfula , amapaki, amakhefi , indawo yokudlela , izitolo namaklabhu.I-Foxtel & Wi Fi iyatholakala .Indawo ekahle yokubalekela imibhangqwana noma imindeni.
I-Harbour Hide Away iyindlu yokulala evuselelwe engu-2 enakho konke okudingayo kubekwe maphakathi nedolobha.
Akhiwe ngamawodilobhu kuwo womabili amakamelo anopende omusha kanye nokhaphethi omusha.Kuhlinzekwa yonke ilineni.
Indawo yokuhlala ebanzi enosofa othokomele ongabuka i-Foxtel, i-Dvd's, i-Smart tv ujabulele i-wi-fi yamahhala noma uphumule.
Ikhishi elihlome ngokuphelele elinendawo eningi kanye nelondolo ehlukile.
Indawo engaphandle ine-bbq enhle nelungiselelo langaphandle elihle futhi eliyimfihlo.Indawo yokupaka izimoto iyatholakala.
4.80 out of 5 stars from 248 reviews
4.80 · 248 okushiwo abanye
Indawo iyamangalisa kodwa isayimfihlo kakhulu emgwaqeni othule obhekene ne-calypso caravan park ethule kakhulu futhi iyunithi isethelwe ngemuva kwendawo.
Ibungazwe ngu-Darren & Collette
We are long term residents of Yamba and would like to share our beautiful coastal town with you.We are a family that loves the outdoors and everything this amazing town has to (Website hidden by Airbnb) to help you with any enquiries to make your stay everything you want it to be.
We are long term residents of Yamba and would like to share our beautiful coastal town with you.We are a family that loves the outdoors and everything this amazing town has to (Web…
Sihlala efulethini eliphezulu elihluke kakhulu kodwa sizobe silapha ukuze sisize nganoma yini oyidingayo futhi njengoba abahlali besikhathi eside singakunikeza izeluleko ezinhle ngezinto okufanele uzenze nezindawo ongaya kuzo.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-14895-2